5 AmaPhakethe Kazwelonke Ukubuka Ingqikithi Ephelele Yelanga
Izindawo I-united states
5 Amapaki Kazwelonke Lapho Ungabheka Ingqikithi Yonke I-Solar Eclipse
Ngo-Agasti 21, 2017, ukuphela kokushisa kwelanga kuzokwenzeka eNyakatho Melika. Ngesikhathi esingaba amahora amabili nantathu, iningi lezwekazi lizobona ukuphela kwelanga, kanti labo abasendaweni engaba ngu-70-male band egijima e-Oregon kuya eNingizimu Carolina bazoba nemizuzu embalwa yenani eliphelele. Yisikhathi sokuqala lesi senzakalo sezulu esenzeke kusukela ngo-1979, okwenza kube yithuba elingavamile ukufakaza lesi senzakalo esimangalisayo sokuqala kwemvelo.
Lokhu kuye kwabangela abantu abaningi ukuba benze izinhlelo zokuhamba ukuya ezindaweni lapho ukuphela kwelanga kuzobe kuvelele khona, ngamahhotela, emakamu, nasezindaweni eziqashiwe sekubekwe izinyanga ngaphambi kwesikhathi. Njengoba kuvela, indlela yokuvuthwa empeleni izowela ngaphezu kwamapaki kazwelonke wase-US, okwenza lezo zindawo ezimangalisayo zendawo yangaphandle indawo enhle yokubukela inyanga ukuhamba lonke ilanga. Senze uhlu lwethu lwamapaki amazwe angcono kakhulu ukuzwa lo mcimbi njengoba uqhubeka, ungakhohlwa ukuletha izibuko zakho zokuvikela.
Imibhede kaJohn Day Imfuyo Yesihlabathi Isikhumbuzo Sezwe: Oregon
TerenceLeezy / Getty Izithombe
Ukwehla kwelanga kuzoqala empeleni e-western US ekuseni ekuseni ka-Agasti 21 bese uhamba empumalanga usuku lonke. Enye yezindawo zokuqala zepaki ezizowela emgwaqweni wayo zizobekwa I-John Day Fossil I-Monument yesizwe, okuzohlangana nayo yonke imizuzu engaphezu kwemibili lapho inyanga ivimbela ilanga. Lokho kusho ukuthi kuyoba cishe i-black black for that period of time, ukuhlanza isikhathi sasebusuku phakathi nosuku.
Leli paki liyaziwa kakhulu ngerekhodi layo elibanzi lemvelo yase-Oregon yasendulo, ebuyela emuva eminyakeni eyizigidi ezingu-40. Ukuxubana phakathi kwezintaba ezimibalabala kanye ne-bluffs yizinsalela eziningana zama-fossil, ezingafinyelelwa emigwaqweni yokuhamba noma imizila yokushayela enhle.
I-Grand Teton National Park: i-Wyoming
I-Grand Teton National Park. Robert Alexsander / Getty Izithombe
I-Grand Teton National Park iyindawo yokumangalisa noma yimuphi umnyaka, okumele kube yindawo evelele yokubukela ukushona. Iphinde iwele endleleni yokugcina futhi kufanele ihlangane nemizuzu eminingana yobumnyama obuphelele. Eqinisweni, ipaki ilungiselela ukuhanjiswa kwezivakashi ngo-Agasti 21, ngakho-ke uye wachaza izindawo ezithile zokubheka ukuphela kwelanga ukuze kugcinwe kahle ukuqhubeka. Ngaphezu kwalokhu, izingozi zepaki nezinkanyezi zizosiza ukuvakashela izivakashi ngokugcwele ngokugcwele, ukunikeza izinhlelo zokuhumusha nokubeka amakholesikhiphu ukuze athathe umzuzu ngokugcwele.
I-Yellowstone National Park: i-Wyoming, i-Idaho, e-Montana
I-Grand Canyon yase-Yellowstone. Smith Collection / Gado / Getty Izithombe
Ipaki kazwelonke yokuqala yaseMelika isesinye sezinga eliphezulu kakhulu. I-Yellowstone iyindawo enhle kakhulu egcwele ama-vistas aphefumulayo nezinkomo zasendle ezimangalisayo, ezibeka phakathi kwamapaki avakashelwa kakhulu unyaka ngamunye. Ubuningi bokusebenza komzimba okwenzeka kuyo yonke epaki kudala indawo ethile yezwe ezindaweni ezithile, okumele kube okuphelele ukubuka ukucwiliswa njengoba kuvela.
Kumele kuqashelwe ukuthi i-Yellowstone ihlala emakhilomitha amancane enyakatho yeGrith Teton National Park, ebeka nje ngaphandle komugqa wento yonke. Lokho kusho ukuthi ngosuku lokucwiliswa, izivakashi epaki ngeke zithole izimo eziphelele ze-blackout ezitholakala kwenye indawo. Kodwa ngoba sesiseduze kakhulu nendawo ye-totality, kufanele kube yindawo ekhangayo kakhulu ukubona ukuboniswa kwasezulwini kwenzeke ngaphezulu. Khumbula, ukuphela kwelanga kuzokwenzeka isikhathi eside emahoreni ambalwa, kuyilapho konke okwenzekayo kuvele emaminithini ambalwa nje.
Izintaba ezinkulu ezibhemayo: Tennessee neNorth Carolina
Malcolm MacGregor / Getty Izithombe
Njengoba ukukhanya kwelanga kuhamba empumalanga kulo lonke usuku ngo-Agasti 21, i-Great Smoky Mountains National Park nayo iyowela endleleni yayo. I-Smokies inezintaba eziqhakazile, amahlathi aminyene, nezintaba eziphakeme zezintaba, konke okwenza kube yindawo enhle kakhulu abahambi abahamba phambili.
Isivakashi esithemba ukubona ukucwila kufanele kuhambisane nengxenye engasentshonalanga yepaki, ewela ngokuqondile endaweni yendawo yonke. Ezinye izingxenye zepaki zizofakwa ebumnyameni usuku lonke, kodwa ngeke zithole isipiliyoni esiphelele sokuthi yonke into idlulisa. Ngalokho engqondweni, i-Park Service ihlele imicimbi yokubuka ku-Clingmans Dome, eCades Cove, nase-Oconaluftee. Abasebenzi basePark bazoba khona kulezo zindawo ukunikeza ulwazi nokuphendula imibuzo futhi.
I-Congaree National Park (South Carolina)
UBrian W. Downs / Getty Izithombe
Ezindaweni zasendle zaseNingizimu Carolina, iCongaree National Park yindawo eyodwa yokugcina yamahlathi asekuqaleni aseMelika eNyakatho Melika. Lokhu kwenza kube yindawo enhle kakhulu yokuhamba ngezinyawo nezinkambi, ukudweba izivakashi eziyizinkulungwane kulo nyaka. Kodwa, leli paki liye lawela ngqo emgqeni wezitho zonke ekupheleni kwesibindi, futhi okwenza kube yindawo enkulu abantu abahamba ngayo beza ngo-Agasti 21.
Ukugubha lokhu kanye kanye nokuphila okuqhubekayo epaki ibambe uchungechunge lwezinhlelo ezibizwa ngokuthi "Shadows & Science" kulo lonke ngempelasonto esandulele ukucwiliswa. Ukwengeza, ngosuku lomcimbi, abasebenzi bepaki nabo bazohlinzeka ngokunyakaza kokushisa kwelanga, nokuthatha izivakashi zibe yizigaba zeCongaree eziphelele ukubuka ukuqhubeka kwecala.
Izindawo zokuhlala zomndeni ezinhle kakhulu ze-Rocky Mountain
I-Survey ithi: Isiqingatha samaMelika asithathi isikhathi sokuphumula
Ungadliwa nge-Apple Cider
Imibono emihle kakhulu yokuvakasha e-US Midwest
I-Blueberry Recipes esuka eNew England
Izimpendulo Zemihlahlandlela Yama-4 Njalo Izinsuku Zokuhamba Ngayo
Ihhotela le-Indigo Atlanta Midtown - I-Gay-friendlyly e-Atlanta Accommodation
Amazinga aphezulu e-Texas Football Stadium
Izizathu Eziphezulu Eziyisikhombisa Zokuvakashela iThailand
Izipho ze-Connecticut zinikeza ukujabulisa okudala
Izithelo zaseTropical ezivela eMexico Wonke umhambi kufanele azame
Ukuhambela Ukuhamba Nge-La Jolla California
Izindleko zamahhotela nezindawo zokuhlala - I-France Price Price Guide
Isiqondiso sezulu, imikhosi, kanye nemicimbi eFlorida ngoFebhuwari
Unemibuzo yokuhamba emoyeni? Sinezimpendulo
Isifundo Esisha Siveza Indlela AmaMelika Azizwa Ngayo Ngawo Amapaki Kazwelonke
Izindawo ezingcono kakhulu zokubona uMfula i-Mississippi
13 Izipho Eziphambili Kakhulu Zabahambi (Futhi Bonke Bangaphansi Kwedola ama-50)
Hlela i-Brighton Getaway - Hlela ukuphumula okufutshane noma uhambo lwe-Day ukuya eBrighton
Indlela Yokuhlela Uhambo Oluya E-Afrika Ngezinyathelo Ezilula Ezi-10